Oovimba be-XMRUSD-Funda ukurhweba
I-Monero (XMR) Ixabiso: I-$ 180 yeNqanaba leNkxaso libambe, uBullish Reversal May uqalise
Ukuhlaziywa: 26 Disemba 2021
I-Monero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: ngoDisemba 26
Xa iinkunzi zeenkomo ziqhekeza inqanaba lokumelana ne-$ 213, kunokunyuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 244 kunye ne-$ 281. Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-180 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso liye kwi-161 yeedola kunye ne-136 yeedola.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 213, $ 244, $ 281
Amanqanaba enkxaso: $ 180, $ 161, $ 136
IXMRUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Itshathi yosuku lweMonero, nge-26 kaDisemba
IMonero ikwitshathi yemihla ngemihla. I-crypto yayiyi-bearish kwiveki ephelileyo kwaye uxinzelelo lweebhere lonyuka kwaye ixabiso lalihla. Inqanaba lenkxaso ye-180 yeedola livavanyiwe kodwa isantya seebhere asiphumelelanga kwaye ixabiso libuyela umva. Ixabiso liyanda ngeli xesha lizama ukuphula izinga lokumelana ne-$ 213. Ukunyuka kwamaxabiso okongeziweyo kulindelwe.
Ixabiso leMonero lirhweba ngaphezulu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokunyuka kwe-bullish. Xa iinkunzi zeenkomo ziqhekeza inqanaba lokumelana ne-$ 213, kunokunyuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 244 kunye ne-$ 281. Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-180 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso libe phantsi kwe-161 kunye ne-136 yeedola. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
Ixabiso leXMRUSD kwiXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
I-Monero ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso lalidibanisa kwinqanaba lenkxaso ye-180 yeveki edlulileyo. Uxinzelelo lweebhere alukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-$ 180. Ngokunjalo, umfutho weenkunzi zenkomo wawuphantsi ukunyusa ixabiso. Ngomhla we-20 kaDisemba, iinkunzi zeenkomo zafumana uxinzelelo olungakumbi kwaye zityhala ixabiso elibhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 213. Ixabiso lizama ukuphula inqanaba.
Itshathi yeMonero yeeyure ezi-4, nge-26 kaDisemba
Ixabiso lithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini kunye ne-9-day EMA ngaphezu kwe-EMA ye-21-day ebonisa i-market market. Isalathiso samandla esinxulumeneyo singaphezulu kwamanqanaba angama-50 abhekiselele ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa olunokuba yi-pullback.
Ixabiso leMonero (XMR): Kwimeko ye-189 yeedola ezibambe iNqanaba, uBullish uReversal unokuthi uqalise
I-Monero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: ngoDisemba 19
Xa iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola, kunokubakho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 213, ixabiso le-Monero liya kunyuka kwi-$ 244 kunye ne-$ 281 amanqanaba. Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso liye kwi-161 yeedola kunye ne-136 yeedola.
Amanqanaba enkxaso: $ 189, $ 161, $ 136
I-Monero i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Uxinzelelo lwe-bearish luyanda njengoko amakhandlela amaninzi e-bearish aveliswa kwitshathi yemihla ngemihla. Iibhere zenza uxinzelelo kwinqanaba elikhankanyiweyo kodwa iinkunzi zeenkomo zikhusela ngokulinganayo kwinqanaba kwaye yiloo nto ekhokelela kwimodi yokudibanisa. Kukho ukuthambekela kwexabiso lokubuyela umva kwinqanaba elikhankanyiweyo njengoko kwenzekayo ngoJulayi ophelileyo.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-19 kaDisemba
Ixabiso le-Monero lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwe-bearish momentum. Xa iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola, kunokubakho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 213, ixabiso le-Monero liya kunyuka kwi-$ 244 kunye ne-$ 281 amanqanaba. Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso liye kwi-161 yeedola kunye ne-136 yeedola. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-30 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
I-Monero ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Uxinzelelo lweebhere alukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-$ 189 kwaye ngexesha elifanayo, ukunyuka kweenkunzi zenkomo kuphantsi ukunyusa ixabiso. Le meko ikhokelela ekubeni ube nentshukumo ehlukeneyo kwimarike yeMonero okwangoku.
XMRUSD iiyure ezi-4 itshathi, nge-19 kaDisemba
Ixabiso lirhweba malunga nee-EMA ezimbini kunye ne-9-day EMA idityaniswe ne-EMA yeentsuku ezingama-21 ebonisa imarike ephumayo. Isalathiso samandla esinxulumeneyo singaphezulu kwamanqanaba angama-40 abhekiselele phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Monero (XMR) Ixabiso linokuthi liBounce kwiNqanaba leNkxaso ye-189 yeedola
Ukuhlaziywa: 12 Disemba 2021
I-Monero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: ngoDisemba 12
Kwimeko apho kukho ukwanda okuthe kratya kwisantya seebhere ukuwohloka kwenqanaba lenkxaso ye-189 yeedola kunokuba namava, okunokuthi kuhlise ixabiso langaphambili elisezantsi le-161 yeedola. Ukwahlukana kwenqanaba lokumelana ne-$ 216 liya kwandisa ixabiso le-Monero ukuya kumanqanaba e-$ 244 nangaphezulu.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 216, $ 244, $ 281
I-Monero i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-XMR iphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-$ 189 ngoDisemba 09 emva kokuwa okukhulu ukusuka kwi-November ephezulu ye-300 yezinga lokumelana. Iinkunzi zenkomo zigatya ukuncitshiswa kwexabiso elongezelelweyo kunye nokwakhiwa kwekhandlela le-bullish yemihla ngemihla. Ixabiso libuyiselwe umva ukuya kumanqanaba oxhathiso aguqukayo. Isantya se-bearish siyanda. Ixabiso ngoku liyi-bearish, lihamba lisiya kwi-low yangaphambili kwi-161 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, nge-12 kaDisemba
Ixabiso le-Monero lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kuqhagamshelwano olusondeleyo njengophawu lwe-bearish momentum ephantsi. Kwimeko apho kukho ukwanda okuthe kratya kwisantya seebhere ukuwohloka kwenqanaba lenkxaso ye-189 yeedola kunokuba namava, okunokuthi kuhlise ixabiso langaphambili elisezantsi le-161 yeedola. Ukwahlukana kwenqanaba lokumelana ne-$ 216 liya kwandisa ixabiso le-Monero ukuya kumanqanaba e-$ 244 nangaphezulu. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihambelanayo se-14 kumanqanaba e-40 kunye nomgca wesignali okhomba ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Monero ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Isenzo sexabiso kwitshati yeeyure ze-4 sizama ukwenza iphethini yetshathi ephantsi kathathu. Ixabiso lithinte inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola kuqala ngoDisemba 04 kunye ne-pullback. Inqanaba elifanayo lavavanywa ngoDisemba 06. NgoDisemba 10, ixabiso lentengo linyuka kancane kancane.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, nge-12 kaDisemba
Ixabiso lirhweba ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kunye ne-9-day EMA yokuwela ngaphezulu kwe-EMA yeentsuku ezingama-21 ebonisa ukuba iinkunzi zenkomo zilungele ukulawula imarike. Isalathiso samandla esinxulumeneyo sikumanqanaba angama-50 abhekiselele phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso leMonero (XMR): Ukunyuka okuthe kratya kwi-Bears 'Momentum kunokuthi kucuthe ixabiso ukuya kwiNqanaba le-161 yeedola
I-Monero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: ngoDisemba 05
Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso liye kwi-161 yeedola kunye ne-136 yeedola. Xa kukho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 216, ixabiso le-Monero liya kunyuka ukuya kwi-$ 244 kunye namanqanaba e-$ 2811.
I-Monero i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukutyhala ixabiso ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-244 yeedola. Iibhere zala ukunyuka kwamaxabiso okungaphezulu kwinqanaba elikhankanywe. Umfutho we-bearish utyhala i-XMR ukuya kwi-189 yeedola kwiveki ephelileyo kodwa iinkunzi zenkomo ziphazamisa intshukumo ehlayo. Ixabiso libuyele emva kwinqanaba lokumelana ne-216 yeedola. Ukunyakaza okujikelezayo kuyaqhubeka ngaphakathi kwe-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-05 kaDisemba
Ixabiso le-Monero lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwe-bearish momentum. Kwimeko apho iibhere zonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-189 yeedola linokuthi lingene kwicala elisezantsi, elinokuthi lehlise ixabiso liye kwi-161 yeedola kunye ne-136 yeedola. Xa kukho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 216, ixabiso le-Monero liya kunyuka ukuya kwi-$ 244 kunye namanqanaba e-$ 2811. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-30 kunye nomgca wesignali obonisa i-bearish direction.
Ixabiso leXMRUSD kwiXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
I-Monero ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi ye-4-Hour. Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo alukwazanga ukuqhekeza inqanaba lokumelana ne-$ 281. Uxinzelelo lwabathengisi lwaphula inqanaba lenkxaso ye-216 yeedola. Intshukumo yokutshintsha iyayeka njengoko bekuqikelelwe kwiveki ephelileyo.
Itshathi yeMonero yeeyure ezi-4, nge-05 kaDisemba
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini kunye ne-EMA ye-9-day ngaphantsi kwe-EMA ye-21-day ebonisa ukuba ukunyakaza kwe-bearish kuyaqhubeka. Isalathiso samandla esinxulumeneyo sikumanqanaba angama-30 abhekiselele ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Marketing, Uhlalutyo Technical, XMRUSD
I-Monero (XMR) Ixabiso linokuthi liphule iNqanaba leNkxaso ye-$ 244
IMonero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: Novemba 28
Ukuba iibhere ziyaqhubeka ukonyusa umfutho wazo, inqanaba lenkxaso ye-244 yeedola liyakwaphulwa, kwaye iMonero izokwehla iye kuthi ga kumanqanaba angama- $ 216 kunye nama- $ 189. Ukungakwazi ukophula inqanaba lama- $ 244, ixabiso linokunyuka liye kuma- $ 281, $ 300 kunye nama- $ 511 amanqanaba okumelana.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 281, $ 300, $ 511
Amanqanaba enkxaso: $ 244, $ 216, $ 189
I-Monero i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iinkunzi kunye neebhere zazikwimo yokuzabalaza enye kwenye isithuba esingaphezu kweeveki ezimbini. Ukunyuka kwe-bullish kuye kwanyusa ixabiso lokuvavanya inqanaba lokumelana ne-300 yeedola ngaphezu kwamaxesha amabini kodwa izinga libambe kwaye ixabiso alikwazanga ukuphula inqanaba. Uxinzelelo lwe-bearish luvavanye ngokulinganayo inqanaba lenkxaso ye-244 yeedola ngokuphindaphindiweyo kude kube ngoNovemba 16, i-candle engulfing ye-bearish iphuma, eyiphethini ye-bearish chart. Ixabiso lathobela umyalelo kwaye lilandela ulwalathiso lweebhere. Inqanaba lenkxaso ye-$ 216 ihlolwe.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-28 kaNovemba
Ixabiso leMonero liphula amanqanaba enkxaso ye-244 yeedola kwaye iyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-216 yeedola. Irhweba ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokuhamba kwe-bearish. Ukuba iibhere ziqhubeka nokwandisa ukukhawuleza kwazo, inqanaba lenkxaso ye-$ 244 liya kuphulwa kwicala, kwaye i-Monero iya kuncipha ukuya kwi-$ 216 kunye ne-$ 189 amanqanaba. Ukungakwazi ukuphula inqanaba le-$ 244, ixabiso linganyuka libhekiselele kwi-$ 281, i-$ 300 kunye ne-$ 511 amanqanaba okumelana. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihambelanayo se-14 kumanqanaba e-40 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu ukubonisa umqondiso wokuthenga onokuthi ube yi-pullback.
I-Monero ikwintshukumo ye-bearish kwi-4-Hour chart. Uxinzelelo lwabathengi aluphumelelanga xa kuvavanywa inqanaba lokumelana ne- $ 300. Ikhandlela eligubungele i-bearish lenziwe kwaye ixabiso liyehla ukuya kwinqanaba lokuxhasa le- $ 216 emva kokungena kwinqanaba le- $ 244.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 28
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini kunye ne-EMA ye-9-day ngaphantsi kwe-EMA ye-21-day ebonisa ukuhamba kwe-bearish. Isalathiso samandla esinxulumeneyo sikwimigangatho engama-40 yeedola ekhomba phezulu ukubonisa umqondiso wokuthenga onokuba yi-pullback.
Ixabiso leMonero (XMR): Iibhere zikhusela iNqanaba leNkxaso ye-244 yeedola, ixabiso liyanyuka
IMonero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: Novemba 21
Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokutyhala ixabiso ukuba lifikelele kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kwaye ukuhlukana kwenqanaba lokumelana ne-$ 281 kuya kwandisa ixabiso kwi-$ 322 kunye ne-$ 361 kumanqanaba. Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla alikwazanga ukuvala ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, ukuhamba okuhambayo kunokuqhubeka, ngaphantsi kwinqanaba lexabiso langoku li-$ 244, i-$ 261 kunye ne-$ 189 amanqanaba enkxaso.
I-XMRUSD yexesha elide iTrend: Ranging
I-XMRUSD ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yemihla ngemihla. Inqanaba lokuchasana le-$ 281 libamba ixabiso le-Monero kwaye ligxothwe kwinqanaba lenkxaso ye-$ 244. Inqanaba elikhankanyiweyo lingene phantsi kwaye inqanaba lokuxhasa i-$ 216 lihlolwe ngoNovemba 18. Namhlanje, iinkunzi zeenkomo zilawula imarike kwaye ixabiso liyanda ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 281.
Itshathi yoSuku lweMonero, nge-21 kaNovemba
I-Monero ithengisa ngaphantsi kwe-EMA ye-9 kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla kwaye i-EMA ezimbini zihlukaniswe omnye komnye. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokutyhala ixabiso ukuba lifikelele kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kwaye ukuhlukana kwenqanaba lokumelana ne-$ 281 kuya kwandisa ixabiso kwi-$ 322 kunye ne-$ 361 kumanqanaba. Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla alikwazanga ukuvala ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, ukuhamba okuhambayo kunokuqhubeka, ngaphantsi kwinqanaba lexabiso langoku li-$ 244, i-$ 261 kunye ne-$ 189 amanqanaba enkxaso.
I-Monero isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso lifumene i-bearish breakout kwiveki ephelileyo. Abathengisi baye bavumela ixabiso ukuba lidibanise kunye nokuhla kwexabiso ukuvavanya inqanaba lenkxaso ye-216 yeedola. Iinkunzi zikhusela inqanaba elisele likhankanyiwe kwaye ixabiso liyanyuka ukuya kwinqanaba lokumelana le-244 yeedola. Okwangoku, ixabiso lidibanisa kwinqanaba le-$ 244.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 21
I-Monero ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukunyuka kwesantya se-bullish. Isalathiso samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-60 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
Ixabiso le-Monero (XMR) liyaqhubeka nokuHamba ngokuHamba ngaphakathi kwama- $ 281 kunye ne- $ 244 Amanqanaba
Ukuhlaziywa: 14 Novemba 2021
IMonero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: Novemba 14
Ukuchithwa kwinqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso ukuya kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189. Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, iinkunzi zenkomo zingatyhala ingqekembe ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 322 kunye ne-361 yeedola.
I-XMRUSD ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yemihla ngemihla. I-Monero isahamba ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 244. Oko kuthetha ukuba imakethi yeMonero isafumana ukungazinzi okuphantsi. Iinzame zeenkunzi zenkomo zokophula inqanaba lokuxhathisa le-281 yeedola zibonakaliswe zingasebenzi. Iibhere zazicinezela ngokulinganayo kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 244, iinkunzi zeenkomo zikhusela izinga. Ixabiso le-Monero liqhubela phambili intshukumo ejikelezayo ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 244. Ukuqhekeka kusondele kwimarike yeMonero.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-14 kaNovemba
I-Monero irhweba ngapha nangapha kwi-EMA yeentsuku ezi-9 kunye ne-EMA yeentsuku ezingama-21 kwitshathi yemihla ngemihla kwaye ezi zimbini ze-EMA zinxibelelene omnye komnye. Ukuchithwa kwinqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso ukuya kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189. Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, iinkunzi zenkomo zingatyhala ingqekembe ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 322 kunye ne-361 yeedola.
I-Monero isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso lifumene i-fake bullish breakout kwiveki ephelileyo. Abathengisi abazange bavumele ixabiso le-rally kunye nexabiso lehla libuyele kwindawo ephakathi. Kuze kubekho ukuqhawuka kwi-$ 281 okanye kwinqanaba lenkxaso ye-$ 244, ukunyakaza okuhambayo kunokuqhubeka. Amanqanaba asele ekhankanyiwe asabambe ixabiso. Ixabiso ngoku lijongene nenqanaba lokumelana ne-$ 281. Ukunyuka kwesantya senkunzi yenkomo kunokutyhala ixabiso ukuya kwizinga lexabiso le-$322.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 14
I-Monero irhweba ngaphezu kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukunyuka kwesantya se-bullish. Isalathiso samandla esinxulumeneyo singaphezulu kwamanqanaba angama-50 kunye nomgca wesignali ubonisa akukho lwalathiso oluthile.
Ixabiso leMonero (XMR): I-Bullish Momentum iyanda kwiNqanaba le-281 yeedola
Ukuhlaziywa: 7 Novemba 2021
IMonero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: Novemba 07
Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, iinkunzi zenkomo zingatyhala ingqekembe ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 322 kunye ne-361 yeedola. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189.
I-XMRUSD ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yemihla ngemihla. Ixabiso lijinga ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 244. Umzamo weenkunzi zokuqhawula umgangatho wokumelana ne-$ 281 awuzange uphumelele. Iibhere zazicinezela ngokulinganayo kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 244, iinkunzi zeenkomo zikhusela izinga. Ixabiso le-Monero liqhubela phambili intshukumo ejikelezayo ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 244. Isibini semali silindele ukuphuma.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-07 kaNovemba
Ezi EMA zimbini zinxibelelene kwaye iMonero irhweba ngapha nangapha kwi-EMA yeentsuku ezili-9 kunye ne-EMA yeentsuku ezingama-21 kwitshathi yemihla ngemihla. Kwimeko apho ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 281, iinkunzi zenkomo zingatyhala ingqekembe ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 322 kunye ne-361 yeedola. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189.
I-Monero isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso liye lavavanya inqanaba lenkxaso ye-$ 244 kathathu. Inqanaba elikhankanywe lisabambe ixabiso. Iinkunzi zenkomo zichase ukuhla okuthe kratya kwixabiso kunye nekhandlela elikhulu le-bullish livela elityhalele ixabiso kwinqanaba lokumelana ne-281 yeedola. Ixabiso okwangoku lijongene nenqanaba lokumelana ne-$ 281. Ukunyuka kwesantya senkunzi yenkomo kunokutyhala ixabiso ukuya kwizinga lexabiso le-$322.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 07
I-Monero irhweba ngaphezu kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukunyuka kwesantya se-bullish. Isalathiso samandla esinxulumeneyo singaphezulu kwamanqanaba angama-50 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
Ixabiso le-Monero (XMR) lifumana inkxaso kwiNqanaba lama-216 leedola, lijolise kwinqanaba lama- $ 322
Ukuhlaziywa: 10 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Okthobha 10
Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zeenkomo kunokutyhala ngempumelelo ingqekembe engaphezulu kwenqanaba lama- $ 281, ukuveza ixabiso kuma- $ 322 kunye nama- $ 361 amanqanaba okumelana. Ngaphantsi kwexabiso langoku, izithintelo zifunyenwe kwinqanaba lenkxaso leedola ezingama-244, ezinokwehla ziye kwi-216 yeedola nakwii-189levels zeedola.
Kwitshathi yemihla ngemihla, iXMRUSD ikwiintshukumo eziqhubayo. I-Crypto idlale ngendlela ebekuxelwe ngayo kwiveki ephelileyo. Iphethini yetshathi ephezulu eyenziwe ngoSeptemba 06 ikhokelele ekuhlisweni kwe-crypto kwaye yafumana inkxaso kwi-218 yeedola. Ikhandlela elikhuselayo elikhuselayo lavela, eliyikhandlela lokuguqula umqondiso oshukumisayo. Ixabiso leMonero lenyukile, laqhekeza inqanaba lama-244 eedola kwaye lavavanya inqanaba lama-278 eedola ngaphambi kokuvalwa kweemarike ngeveki.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, Okthobha 10
I-Monero ithengisa ngaphezulu kwe-9-day EMA kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla. Ukonyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zeenkomo kunokutyhala ngempumelelo ingqekembe engaphezulu kwenqanaba lama- $ 281, ukuveza ixabiso kuma- $ 322 kunye nama- $ 361 amanqanaba okumelana. Ngaphantsi kwexabiso langoku, izithintelo zifunyenwe kwinqanaba lenkxaso leedola ezingama-244, ezinokuhla ziye kuthi ga kwi-216 kunye ne-189 yamanqanaba eedola.
UMonero unyuselwa kwitshathi yeYure ezi-4. Iibhere zilahlekelwa ngamandla kwinqanaba lokuxhasa i-216 yeedola ngoSeptemba 22, ixabiso liyadityaniswa kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba iinkunzi zeenkomo zifumane umfutho owaneleyo wokuphelisa inqanaba lokumelana ne- $ 244. Ihlanganiswe kwinqanaba lokumelana ne-281 yeedola apho yayinokuphumla okuthe ngqo ngaphambi kokubuyela umva. I-Monero ngoku ithengisa kwinqanaba le-281 leedola ngokunyaniseka okuphantsi.
Itshathi yeeyure ezi-4 zeMoneo, nge-10 ka-Okthobha
I-Monero ithengisa ngeenxa zonke ii-EMA ezimbini, ezibonisa ukuba amandla ebhere kunye neenkunzi zehla. Isalathiso samandla esimalunga namanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali ongabonisi lathiso.
Ixabiso le-Monero (XMR): Iintshukumo zeBullish ezinokuthi ziqale ngeNqanaba lama-244
Ukuhlaziywa: 3 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Okthobha 03
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zinika uxinzelelo ngakumbi, ingqekembe inokutyhalwa ngaphezulu kwenqanaba lama-281 eedola, ukubonisa ixabiso kumanqanaba oxhathiso lwama- $ 322 kunye ne- $ 361. Ngaphantsi kwexabiso langoku izithintelo kwinqanaba lenkxaso le- $ 244, elinokuthi lehle liye kuthi ga kwi-216 kunye ne- $ 189 kumanqanaba.
Kwitshathi yemihla ngemihla, iXMRUSD ikwiintshukumo eziqhubayo. Ixabiso lesilivere ligqibile ukuyilwa kwepateni ephezulu yetshathi eqale ngoSeptemba 06 ekhokelele ekudodobeni kwe-crypto. I-Crypto ifumene inkxaso kwinqanaba le-216. Uxinzelelo lweenkunzi zeenkomo alunakulidiliza eli nqanaba likhankanyiweyo. Ixabiso liyajika kwaye lingene kwinqanaba lama-244 eedola, lonyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 281.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, Okthobha 03
I-Monero ithengisa ngaphezulu kwe-9-day EMA kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zinika uxinzelelo ngakumbi, ingqekembe inokutyhalwa ngaphezulu kwenqanaba lama-281 eedola, ukubonisa ixabiso kumanqanaba oxhathiso lwama- $ 322 kunye ne- $ 361. Ngaphantsi kwexabiso langoku izithintelo kwinqanaba lenkxaso le- $ 244, elinokuthi lehle liye kuthi ga kwi-216 kunye ne- $ 189 kumanqanaba.
UMonero unyuselwa kwitshathi yeYure ezi-4. Ingqekembe ibisentshukumo ye-bearish kwiveki ephelileyo kwitshathi yeeyure ezi-4. Abathengisi balityhale ngempumelelo ixabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso le- $ 216. Iinkunzi zeenkomo zenze iinzame zokunyusa ixabiso ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 244 kodwa iibhere zikhusele inqanaba elikhankanyiweyo. Emva koko, ixabiso laqala ukuhamba okuphakathi kwama-244 kunye nama-216 eedola. Ngo-Okthobha u-01, ixabiso laqhekeza inqanaba lama- $ 244 kwaye ixabiso ngoku libonisa kwinqanaba lama- $ 281.
Itshathi yeXMRUSD yeeyure ezi-4, Okthobha 03
I-Monero ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukuba ukunyuka kweenkunzi kuyanda. Amandla esihlobo akumanqanaba angama-60 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga